Ny okroshka amin'ny lafiny maro - tantara, tombony, fomba fahandro
Rehefa any ivelany ny hafanana amin'ny fahavaratra ary kamo be loatra mandany fotoana ao an-dakozia, azonao atao ny mandeha any amin'ny zaridaina, misafidy kôkômbra marihitra vitsivitsy, radish vaovao, manangona anana maintso: volom-boaloboka, aneta, persily, sorrel ary izay rehetra tonga eo am-pelatananao - tsy afaka mandeha diso ianao, arakaraka ny ahitan'ny maitso azy no tsara kokoa.
Izay rehetra nangonina dia tsy maintsy hosasana, potehina tsara, hafafy sira, fenoy kvass an-trano ary, voila, vonona ny okroshka tsotra indrindra.Hahafapo tanteraka ny hanoanana sy ny hetaheta amin'ny andro fahavaratra izy io ary tsy mila fanaovana sakafo mafana mahandro.
Araka ny hitanao avy amin'ity fomba fahandro ity, ny okroshka dia misy singa roa - legioma sy legioma voatetika, izay nantsoina hoe krochevo, ary fotaka misy ranoka, amin'ny kinova kilasika dia kvass. Tsy sarotra mihitsy, sa tsy izany? Izay mpandray vahiny vao manomboka dia mahazaka lovia toy izany.
Saingy ny okroshka koa dia manana ny tsiambaratelony manokana, raha tsy nisy izany dia tsy ho lasa sakafo fisakafoanana mahafinaritra izay hahagaga ny vahiny vahiny. Andao hiresaka amin'ny antsipiriany bebe kokoa ny zava-drehetra.
Inona no vita krochevo
Maitso be dia be, ny antsasany dia tokony tongolo maintso. Ny sasany tsy misy afa-tsy volom-borona maitso ao anaty okroshka, ny sasany manapaka ny tongolo tongolo fotsy ao anatiny.
Fandraisana fandraisana... Alohan'ny hanampiany azy amin'ilay crumb, dia asaina manafana kely ny anana maitso voatoto miaraka amina tapa-kazo miaraka amina sira, na afangaro moramora amin'ny tananao fotsiny ary avelao izy hijanona mandritra ny fotoana fohy mba hamoahana ilay ranony ary hihamora sy manitra kokoa.
Ho an'ny okroshka, tsara kokoa ny maka salady, miaraka amin'ny hoditra malama, fa raha tsy misy azy ireo dia mety ihany koa ireo mony. Mila manandrana fotsiny ianao alohan'ny manapaka, na mangidy izy ireo. Indraindray ny kôkômbra masira sy namboarina dia tapatapaka ho okroshka.
Vaovao sy be ranony miaraka amin'ny lokony falifaly sy ny tsiro kanto, dia handravaka ny okroshka rehetra.
Mazava ho azy, tsy maintsy hiaraka amin'izy ireo ianao amin'ny okroshka. Voalohany, mila ampangotrahina mafy izy ireo: atsofohy amin'ny vilany misy rano mangatsiaka, ampangotrahina ary avelao hafanana ambany mandritra ny 6-8 minitra. Sasao amin'ny rano mangatsiaka, mangatsiatsiaka ary avy eo madio.
Ny atody mangatsiaka dia azo fehezina fotsiny ary ampiana ao amin'ilay crumb.
Fandraisana fandraisana... Na azonao atao ny manova ny tsiron'ny lovia amin'ny fikosehana ny atody atody masaka mafy miaraka amin'ny voantsinapy sy ranom-boasarimakirana ary manampy siramamy kely. Tetehina tsara amin'ny antsy ny proteinina sisa tavela.
Hahafapo kokoa ny sakafonao ity ary hanamora ny fanandramana ity lasopy fahavaratra ity. Ao amin'ny okroshka dia misy hena nendasina sy nandrahoina, tongotr'akoho nifoka, ham, saosisy nandrahoina sy semi-setroka, hena voa (fo, havokavoka). Okroshka miaraka amin'ny lelan'ny hen'omby dia heverina ho sakafo matsiro, ary ny sasany manampy bacon voatoto ao. Azonao atao ny manangona ireo sisa tavela amin'ny vokatra hena tavela ao anaty vata fampangatsiahana ary manamboatra okroshka miaraka amin'ny fanapahana mangatsiaka. Azonao atao ny mitanisa fotoana lava - tsy voafetra ny haben'ny sary an-tsaina.
Fandraisana culinary. Tamin'ny andro taloha, ny hena voatetika ho an'ny okroshka dia afangaro amin'ny horseradish grated ary avela hidy mba ho feno fofona masiaka ny hena.
Ny fomba fahandro amin'ny okroshka miaraka amin'ny trondro dia saika hadino, nampiasa trondro trondro renirano nandrahoina - pike perch, salmon mavokely, trout, tench. Saingy ny paikady dia noheverina ho tsara indrindra ho an'ny okroshka, izay tsy nanana trondro mahery sy fanahy ary nanandrana toy ny hena.
Na izany na tsy izany dia tena ilaina ny miantoka fa tsy misy taolana trondro hita ao anaty lovia. Tsy fady ny manampy hazan-dranomasina fa tsy trondro na miaraka aminy
Ary amin'ny Don, dia mbola mahandro okroshka miaraka amina trondro maina izy ireo, na mihinana trondro toy izany miaraka amina kaoka okroshka.
Ho an'ny okroshka dia ampangotrahina "manao fanamiana" mandra-pahatonga azy ho malefaka, hampangatsiaka, hodiovina ary hokapohina ho potika. Tena matsiro ny mihinana okroshka miaraka amin'ny manaikitra amin'ny ovy nendasina, nefa avy eo tsy maintsy kivy ianao amin'ny sakafo iray.
Tsy voarara ny manampy karaoty, legume, holatra masira na ampangotrahina amin'ny okroshka.
Ahoana no manapaka ny okroshka
Mba hanomanana potipotika, ny vokatra voafantina dia potipotehina anaty cubes kely na tapatapahina amina tapa-taratasy kely, araka ny itiavanao azy.
Misy olona maniry sombin-javatra lehibe, olona kely iray, fa ny fikolokoloana ilay vokatra tafiditra ao amin'ny okroshka amin'ny grater dia fahatezerana ao anaty lovia.
Aleo mandany fotoana bebe kokoa, fa ataovy tsara daholo. Ilaina ny fanapahana ny vokatra tsara sy mitovy, avy eo ny lovia vita dia hanana endrika manintona.
Noho izany, vonona potipotika izy io. Ahoana no hamenoana azy? Miantsoantso vazivazy ity lasopy fahavaratra ity ho an'ny olona sasany hoe "salady voafafy kvass". Fa ny okroshka dia tsy araraka amin'ny kvass foana.
Misy fepetra iray lehibe - ny ranoka dia tsy maintsy misy tsiro marikivy. Ny ranom-boasarimakirana dia matetika ampiasaina hamelombelona ny fotony.
Okroshka amin'ny kvass - fomba fahandro
Kvass dia azo antsoina hoe harem-pirenen'ny Russia tsy misy fihoaram-pefy. Tamin'ny vanim-potoana talohan'ny revolisionera, ny fianakaviana tsirairay dia samy manana ny fomba fahitan'ny fianakaviana azy ho an'ny kvass. Ny ankamaroany dia vita tamin'ny malt ary, miankina amin'ny volombava na malt vita amin'ny varimbazaha, maizina na maivana, dia saika fotsy kvass no nahazoana azy. Okroshka dia nandrahoina tamin'ny kvass fotsy, marikivy sy maranitra noho ny mainty.
Ny fanaovana kvass ao an-trano dia tsy sarotra velively ankehitriny. Mba hanaovana izany, dia mila mofo marokoroko misy mofo fotsy sy mainty ianao, masirasira maina, siramamy sy rano - ary afaka andro vitsivitsy dia efa vonona ny zava-pisotro mampatanjaka.
Okroshka misy ronono marikivy na kefir - endri-tsakafo
Ity dia kinova taty aoriana ary avy any amin'ny faritra atsimon'i Russia. Ny vokatra vita amin'ny ronono mialoha ny masirasira dia matetika no soloina rano tsotra na mineraly ao anaty refy 1: 1 ka tsy matevina loatra.
Misy fomba fahandro amin'ny fanaovana okroshka amin'ny whey tavela aorian'ny fanaovana fromazy, na dibera azo aorian'ny fikotrehana dibera, fa ampiasaina tsy voasivana izy ireo. Mifanohitra amin'izany kosa, marikivy marikivy betsaka no tokony ampiana amin'ny whey na dibera ho an'ny matevina.
Ny ohatra okroshka tsotra indrindra vita amin'ny ronono marikivy dia ilay lasopy mangatsiaka Bulgaria malaza Tarator misy kôkômbra vaovao sy ravina mint ary chalop Uzbek miaraka amina ravina basil volomparasy marobe.
Okroshka amin'ny rano tsotra na mineraly
Safidy ho an'ny tranga tafahoatra ity, rehefa maniry okroshka ianao, fa tsy misy kvass na kefir eo am-pelatanany. Na izany aza, na ny rano aza dia tsy maintsy asiana kely fanabeazana kely - asina asidra amin'ny alàlan'ny fametahana ilay ranom-boasarimakirana ao anatiny.
Tamin'ny andro taloha, noho io antony io dia narotsaka tao ny pickle kôkômbra na ny ranon'ny paoma voahosotra. Ny mpandinika maoderina dia manome soso-kevitra ny fampifangaroana ny rano amin'ny crème souris, ary ny rano mineraly amin'ny mayonnaise.
Afaka mahandro okroshka amin'ny fampidirana voankazo, fampidirana kombucha. Na andramo ity safidy lozisialy ity: araraka labiera malemy ilay sombin-javatra. Ahoana ny fahaizan'ny okroshka ao amin'ny champagne? Ny olona sasany efa nanandrana an'io safidy io koa.
Ahoana ny fomba hanompoana okroshka amin'ny latabatra
Na ny hetsika tsotra toy izany aza dia manana ny fahaizany manokana.
Azonao atao ny manompo okroshka ao anaty lalotra tsara na vilany, toy ny lasopy mangatsiaka. Tena tsara raha ampidirina mandritra ny adiny iray farafahakeliny amin'ny toerana mangatsiaka alohan'ny hisakafoanana. Ity fitsipika ity dia mihatra indrindra amin'ny okroshka masaka amin'ny ronono marikivy.
Amin'ny andiany faharoa, manompo am-patotoana ao anaty lovia salady izy ireo, ary ao anatiny kvass anaty tanimanga na vera tsara tarehy. Ka samy afaka manao ny sakafo ho manify na matevina araka ny itiavany azy.
Afaka mandeha lavitra kokoa ianao ary mandamina ireo sakafo voatetika ao anaty lovia misaraka mba hahafahan'ny tsirairay manamboatra ny okroshka tonga lafatra - hena na legioma.
Raha ny fitsipika dia mihinana okroshka amin'ny kvass misy mofo mainty izy ireo, ary ronono masirasira - misy fotsy. Ny tsiro dia matsiro kokoa raha totoina kely amin'ny toaster.
Ahoana no hamenoana okroshka
Tsy maintsy eo ambony latabatra ny crème masira sy ny voantsinapy efa vita na mayonnaise mangidy. Raha irinao dia azonao atao ny manatsara ny serivisy amin'ny alàlan'ny fametahana vilia baolina misy soavaly malemy na radia voatetika tsara.
Raha tsara ny voantsinapy amin'ny kvass sy kefir, dia ampiana horsrosadka ho okroshka amin'ny kvass fotsiny.
Fandraisana culinary. Ny lozisialy dia efa nohanina niaraka tamin'ny kvass tany Rosia, ary mba hanesorana ny mangidy ao aminy dia apetraka ao anaty vata fampangatsiahana tokony ho antsasak'adiny ny legioma faka voatetika alohan'ny hikarakarana azy.
Recipe okroshka tsy mahazatra
Nanomboka nanompo tao amin'ny tranombarotra rosiana tamin'ny tapaky ny taonjato fahasivy ambin'ny folo. Na izany aza, nandritra ny taonjato 2 mahery, ny olona dia raiki-pitia tamin'ny okroshka ka tsy leo amin'ny fanatontosana fomba fahandro sy fiovaovana vaovao mihamaro hatrany. Zavatra mahaliana azonao andramana, tombanana, soratanao.
Okroshka amin'ny ranom-voatabia
Raha tokony ho kvass, ny ranom-boankazo dia afangaro amin'ny kôkômbra na voatabia voatabia, ranom-boasarimakirana ary ranom-boankazo vitsivitsy saosy Tabasco na sakamalaho mena no ampiana ho spiciness. Azo inoana fa ny mpanoratra ny hevitra dia nahazo aingam-panahy avy amin'ny lasopy tomasy mangatsiaka espaniola gazpacho.
Okroshka amin'ny ron-kena
Ity fomba fahandro ity dia tsy azo antsoina hoe ambany kaloria, fa tadidinao fa vao haingana ny dokotera no nanoro hevitra ny fampidirana ron-kena amam-borona ao amin'ny sakafon'ny mpiray finoana. Amin'ny tranga manokana, rehefa mila manamafy ny tanjakao ianao, dia azo ampiasaina ihany koa ny fomba fahandro ho an'ny okroshka.
Ny ron-kena mangatsiaka, masaka amin'ny hena mahia, dia tsy maintsy araraka mba hialana amin'ny rano ambonin'ny tany ny tavy fotsy mangatsiaka. Manampia ranom-boasarimakirana, siramamy kely ary voantsinapy ho azy ary ampiasao fa tsy kvass amin'ny fanaovana okroshka. Ary mba hahatonga azy io ho matsiro kokoa sy mahafa-po kokoa, dia efa namboarina tamin'ny mayonnaise. Mazava ho azy fa tsy ho an'ny olon-drehetra ity fomba fahandro ity.
Okroshka matevina amin'ny kefir miaraka amin'ny tongolo lay
Fomba fahandro tena mahaliana ho an'ny andiana vokatra. Anisan'izany ny dipoavatra, voatabia, kôkômbra, salady ary tongolo. Manomàna misaraka fisoloana akanjo ho an'ny okroshka avy amin'ny tongolo lay, mayonnaise, ranom-boasarimakirana ary sira ary ampio amin'ny crumb. Afangaroy ny zava-drehetra ary arotsaho ny kefir tsy voadio. Tokony ho matevina be izy io.
Dagestan okroshka miaraka amin'ny zanak'ondry nandrahoina - fomba fahandro
Azo antoka fa kôkômbra lava voankazo (misy karazana salady toy izany) sy aneta. Ny mampiavaka azy dia ireo vokatra voatetika ho an'ny okroshka dia ampidirina anaty ronono boribory miharo rano (1: 1), fa tsy ny mifamadika amin'izany. Mety misy fiatraikany amin'ny tsiron'ny lovia koa io filaharana io? Ilaina ny manandrana an'izao sy izao.
Ahoana no nanombohan'izany rehetra izany?
Ary okroshka dia nanomboka turi - lovia manetriketrika an'ny mahantra. Voatahiry ny fomba fahandro azy ary azonao atao ny manandrana mahandro azy tsy mahaliana mandraka androany. Ho an'ity, mofo mainty maina no kosehina amin'ny tongolo gasy ary hokapaina ho cubes kely. Manampia kôkômbra vaovao voatetika, tongolo maintso somary torotoro miaraka amin'ny sira ary faka-soavaly voatoto. Araraka ny lafarinina miaraka amin'ny menaka legioma ary afangaro. Arotsaho miaraka amin'ny kvass ny crumbly. "Toy ny mofo sy ny kvass, dia toy izany koa ny zava-drehetra miaraka amintsika" - tsy ho zava-poana no nampiasan'ity ohabolana ity tany Russia.
Lovia mitovy amin'izany no hita tany amin'ireo mponina tany atsimo. Izany no fanomanana ny fonja amin'ny teny Armeniana: cubes kely amin'ny mofo mainty maina sy tongolo voatetika dia araraka amin'ny kefir afangaro amin'ny rano (1: 1). Tsotra ihany.
Turyu dia mihinana avy hatrany aorian'ny fandrahoana, mandra-pahatonga ny mofo hanamontsamontsana ho lasa matavy.
Ny tombotsoan'ny okroshka
Mora ny mahita fa any amin'ny faritra atsimo sy atsinanana dia mahandro ronono marikivy matetika izy io, ary any Russia - miaraka amin'ny kvass. Saingy, hafahafa ihany, ireo fiovaovana roa ireo dia misy vokany mitovy amin'ny vatan'olombelona. Ny zava-misy fa ny vokatra vita amin'ny ronono masirasira dia misy zavamiaina bitika marobe mahasoa dia voalaza betsaka. Na izany aza, ny kvass Rosiana tsotra dia tsy misy latsak'izany.
Ny tena izy dia ny malt no ampiasaina amin'ny fanomanana azy. Inona no atao hoe malt? Ireo dia voam-bary voamaina - orza, rai ary varimbazaha. Mandritra ny fanamasinana ny masirasira amin'ny fisian'ny siramamy, singa sy vitamina marobe, tena ilaina ho an'ny olombelona, ​​no foronina avy ao, indrindra ny C sy ny vondrona B.
Kvass dia zava-pisotro velona tsy misy fihoaram-pefy. Tsy misy fanoherana ny fampiasana azy. Toy ny zava-pisotro misy ronono masirasira, dia misy fiatraikany mahasoa amin'ny fiasan'ny làlam-pandevonan-kanina, manara-penitra ny metabolisma ary, amin'ny ankapobeny, dia misy vokany manatanjaka ny vatan'olombelona. Ankoatr'izay, kvass dia manamafy ny areti-nify. Ny vehivavy bevohoka sy ny zaza ihany no ferana tsy hampiasa azy io, satria an'ny zava-pisotro mahamamo, na dia kely aza ny anjaran'ny alikaola - 1,2% ihany.
Saingy tokony ho tsaroana fa ny kvass indostrialy dia miaina pasteurisation ary ireo zavamiaina bitika mahasoa ao aminy, indrisy, maty, ary ny zava-pisotro very ny ankamaroan'ny hery manasitrana. Ilaina ny mandray ny sitra-po amin'ny totohondry, manao kvass anao manokana - avelao izy hijoro isaky ny lakozia ao anaty siny lehibe telo-litatra.
Raha miresaka ny atin'ny kaloria an'ny kvass isika dia 27 kcal isaky ny 100 g ny vokatra fotsiny. Ny atin'ny kaloria amin'ny ronono marikivy dia manodidina ny avo roa heny - 56 kcal isaky ny 100g, saingy tadidinay fa ho an'ny fanomanana okroshka dia mampiasa ronono curdled antsasaky diloin'ny rano izy ireo.
Ny atin'ny kaloria an'ny sakafo efa vonona dia sarotra ny anarany, satria miankina amin'ny vokatra ampiasaina, indrindra ny hena. Amin'ny ankapobeny, ny atin'ny kaloria an'ny okroshka kilasika dia tsy mihoatra ny 78 kcal isaky ny 100 g ny vokatra. Ity lovia ity dia singa fihinanan-tsakafo tena tsara ho an'ireo mitady hihena.
Ary raha dinihinao ihany koa ireo fananana mahasoa rehetra amin'ny kvass sy ronono marikivy, dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sakafo fotsiny ny okroshka, indrindra amin'ny vanin-taona mafana.
Fandraisana culinary. Amin'ny hafanana dia matetika apetraka ao anaty okroshka ny cubes gilasy; ity lovia ity dia misy vokany mamelombelona tsara. Indraindray ny cranberry dia atsofoka ao anaty rano mba hampangatsiaka azy, izany dia hanome piquancy manokana ny lovia.
Fomba fahandro okroshka mahazatra
Tsy maintsy lazaiko fa lovia mety ho an'ny fanandramana izany: afaka mahandro roa amin'izy ireo ianao, izay tsy hisy akora iraisana iray akory, ary samy hatao hoe okroshka izy roa!
Farany, fomba fahandro ho an'ny okroshka mahazatra isaky ny olona, ​​manodidina anao afaka handihizana, manampy na manilika singa.
Akora ilaina amin'ny okroshka mahazatra:
1 atody nandrahoina mafy;
Kôkômbra vaovao vaovao 2;
ahitra maitso iray lehibe, ny antsasany tsara dia tongolo maintso;
Hena mahia nandraho 50g;
kvass ampy hahazoana lovia ny hatevin'ny irina;
Krs marikivy 1 sotro fihinana.
Krs marikivy 1 sotrokely ho an'ny akanjo. Nambara ny tsiambaratelon'ity lovia rosiana voalohany ity, ary mifototra amin'ny fahalalana azo, ny tsirairay dia afaka mamorona okroshka azy manokana, izay ho lasa sakafom-pianakaviana ankafiziny indrindra, ary ny fomba fahandro an'ny fianakaviana no handova azy. Rehefa dinihina tokoa, ity dia lovia matsiro sy mahasalama ary miavaka.
Lasopy matevina: fomba fahandro misy sary
Recipe ho okroshka miaraka amin'ny saosisy amin'ny rano mineraly
Inona no lasopy? Karazan-lasopy
Okroshka matsiro miaraka amin'ny hen'omby
58 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,493.